Sikhuseleke kangakanani iminyaka engamashumi amabini emva kukaSeptemba 11? Iyothusa!
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » I-WTN » Sikhuseleke kangakanani iminyaka engamashumi amabini emva kukaSeptemba 11? Iyothusa!
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Safety • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo • I-WTN
UGqr. Peter Tarlow, umongameli WTN
Ukuhamba namhlanje kunzima kakhulu kunakwiminyaka engamashumi amabini eyadlulayo. Ngapha koko, ishishini lokuhamba litshintshe kakhulu kwaye ngokukhawuleza kangangokuba phantse yonke into ekuthethwa ngayo ngalo phantse iphelelwe lixesha. Kwiminyaka engama-19 eyadlulayo, bambalwa abebenokucinga ukonzakala nokufa okwabangelwa yi-COVID-11, okanye nolawulo kwezentlalo oluye lwenziwa ngulo bhubhani. Ukubeka izinto ngendlela eyiyo, ngo-Septemba 2001, 3,000, kwafa abantu abangaphezulu kwama-19 ngosuku olunye. Ngoku kubudala be-COVID-4, ubhubhane ubulele ngaphezulu kwesigidi se-XNUMX sabantu.
The Ukhenketho lweHlabathik uMongameli, uGqirha Peter Tarlow, ukhuphe ingxelo ecaphukisayo ebonisa iminyaka engama-20 ukusukela nge-11 kaSeptemba, 2001, kunye nendlela umhlaba wokuhamba nokhenketho otshintshe ngayo.
Nangona uninzi lwabantu lusazikhumbula ezo ntsuku zimanyumnyezi, ngoku kukho isizukulwana esipheleleyo esazalwa emva komhla kaSeptemba 11, 2001. Kubo 9/11 sisiganeko sembali esenzeka kudala.
Ubhubhane we-COVID-2020 we-21-19 udale uluhlu lwemiceli mngeni kukhenketho. Kubantu abaninzi abancinci abakwazi ukucinga umhlaba wokuhamba ngaphandle kwezithintelo kwaye uninzi lwabo aluqondi ukuba uninzi lwezithintelo zethu zokuhamba zinengcambu yazo kwinto eyenzeka ngoSeptemba 11, 2001.
Kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo, iingcali kwezokhenketho nezokhenketho ziye zaqonda ukuba ingcinga yakudala yokuba “ukhuseleko alongezi nto” ayisekho kumagosa oKhenketho namhlanje abona ukhuseleko njengenxalenye yemizamo yabo yentengiso. Ukhuseleko lwezokhenketho kunye nobupolisa, kanye xa yayingumntwana wesibini kwilizwe lokhenketho nokhenketho, ngoku liyinxalenye ebalulekileyo yeshishini.
Abakhenkethi kunye nabathengi bezohambo abasaloyiki ukhuseleko; bamkela yonke imiba yabo, ukusuka kumanyathelo obundlobongela ukuya kwimicimbi yezempilo yoluntu. Abahambi babuza abathengisi ngayo, bafunde ngayo, kwaye basebenzise amanyathelo okhuseleko njengeyona nto iphambili ekwenzeni izigqibo. Ngapha koko, kwi-COVID-19, uluntu ngoku luthatha amanyathelo ezempilo njengenxalenye yokhuselo lokhenketho.
Enye yeendlela eli xesha litsha lokhuselo liza ngayo kukukhula kwemikhosi yezokhuseleko yabucala (ekwabizwa kwezinye iindawo zehlabathi ukuba yimikhosi yamapolisa yabucala).
Ukhuseleko lwabucala, kunye nee-TOPPs (ezobupolisa ezijolise kukhenketho kunye nenkonzo yokhuselo) iiyunithi ngoku ziye zaba zizithako eziyimfuneko kushishino lwezokhenketho olunempumelelo. Le nyaniso iyinyani ngakumbi kumazwe, afana ne-United States kunye neLatin America, apho kukho ulwaphulo-mthetho oluhamba kunye namaza olwaphulo-mthetho kunye neendawo ezinokhuselo ngakumbi.
Nangona le mikhosi yezokhuseleko yabucala ingahlali inelungelo lokubanjwa, ibonelela ngobukho kunye nexesha lokuphendula kwangoko.
Kananjalo, kwixesha lokunyuka kokungaqiniseki kwezopolitiko nezoqoqosho, ukhuseleko lwabucala kwezinye iindawo zokhenketho lube yinto enokuqwalaselwa.
Ikwayindlela yokukhetha ukuba oorhulumente besixeko bajongane nomnqweno woluntu wokuzikhusela kunye nokukhululeka kwimithwalo enzima yerhafu. Kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo, uluntu belulindele uhlobo oluthile lokhuseleko kungekuphela kwizikhululo zeenqwelo moya kodwa kwiindawo ezinje ngeevenkile, iindawo zokuzonwabisa / iipaki, iindawo zokuhamba, iihotele, amaziko endibano, iinqanawa zokuhamba ngenqanawa, kunye nemidlalo.
Ngaphandle kokuphuculwa okuninzi kwilizwe lokhuseleko lwezokhenketho kunye nee-TOPPs, kusekuninzi ekufuneka kwenziwe.
Indlela esenza ngayo kwicandelo lezokhenketho kule minyaka ingamashumi idlulileyo
Mhlawumbi akukho nxalenye yokhenketho ifumene ingqwalaselo enkulu kwihlabathi liphela njengakwishishini leenqwelo moya. Iminyaka engamashumi amabini edlulileyo ibe namahla ndinyuka kushishino lwenqwelomoya, nge2020 yeyona nto iphambili kushishino. Alithandabuzeki elokuba iinqwelomoya ziyinxalenye ebalulekileyo yokhenketho: ngaphandle kokuhamba ngenqwelomoya, indawo ezininzi ziyafa, kwaye ukugcwala komoya kuyinxalenye ebalulekileyo yezorhwebo nakwezokhenketho, kwezorhwebo, kunye nokuthunyelwa kwempahla.
Ukuhamba ngenqwelomoya namhlanje akukho mnandi kangako kunakwiminyaka engamashumi amabini ananye eyadlulayo okanye kwiminyaka emibini eyadlulayo. Abahambi abaninzi bayabuza ukuba onke la manyathelo ayimfuneko okanye uyazibuza ukuba akunakuba kungenangqondo, yinkcitho, kwaye akunantsingiselo. Abanye banembono ephikisayo. Kwiminyaka yobhubhane, ukhuseleko lokuhamba ngenqwelomoya alukho nje malunga nokufumana inqwelo moya kuphela, kodwa kwanokuqinisekisa ukuba iitheminali zicocekile kwaye ukuphatha imithwalo akusasazi usulelo.
Ayisiyiyo kuphela imimiselo emitsha yezokhuseleko eyenze nzima ubomi kubahambi, kodwa kunye neendlela ezininzi zenkonzo yabathengi ziye zancipha. Ukusuka ekutyeni kuye ekuncumeni, iinqwelomoya zinikezela ngokuncinci kwaye zihlala zibonakala ngathi azibalulekanga kwindlela abaphatha ngayo uluntu. Kuyadanisa ke ngoko ukuba kuncinci kakhulu okwenziweyo kukhuseleko lwezothutho lomoya. Uninzi lwabathengi bayazibuza ukuba ukhuseleko lwenqwelomoya lusebenza ngakumbi kunokuba lusebenza.